Turkiga iyo Sucuudiga oo ka wada-hadlay Xiisada Khaliijka Carabta
Dedaalada Diblomaasiyadeed ee lagu dejinayo xiisada ka dhex aloosan khaliijka Carabta oo kordhay iyo Rex Tillerson oo baajiyey shir muhiim u ah…
Riyadh-Wasiirka Arrimaha dibada Turkiga oo booqasho ku tegay jimcihii boqortooyada Sucuudiga, ayaa la kulmay boqorka dalkaas, waxaanu kala hadlay dejinta xiisada diblomaasiyaddeed ee u dhaxaysa Qadar iyo xulafada uu Sucuudigu hogaaminayo.
Wasiirka Arrimaha Dibada Turkiga Mevlut Cavusoglu oo kulanka uu la yeeshay boqor Salman bin Abdulaziz Al Saud, aanay ka soo bixin war rasmi oo ay labada dhinac soo saareen, ayaa qayb ka ahaa dedaalo Turkiga, Maraykanka iyo wadamo kale oo ay Kuwait kamid tahay ku doonayaan in lagu dejiyo xiisada diblomaasiyaddeed ee cirka isku shareertay.
Ilo-wareedyo diblomaasiyaddeed oo laga helay kulanka labada dhinac, ayaa sheegay in isfaham la xidhiidha qodobada laga wada hadlay Shirka lagu gaadhay.
Laakiinse Wakaalada Wararka ee AFP waxay intaa ku dartay inaan xog faahfaahsan laga helin kulanka Boqorka Sucuudiga iyo Wasiirka Turkiga.
Dhinaca kale, Wasiirka Arrimaha dibada ee Maraykanka ayaa ka baaqday shir uu kaga qayb-geli lahaa dalka Mexico si uu sii ambo qaado wada-xaajoodyada lagu daminayo xaalada diblomaasiyaddeed ee ka aloosan bariga dhexe.
Afhayeen u hadlay, Wasaarada Arrimaha dibada Maraykanka ayaa sheegay in Mr. Rex Tillerson, uu xidhiidho dhanka Telefoonkaa la yeeshay hogaamiyeyaasha Sucuudiga, Baxrayn, Imaraadka iyo Qatar, si uu isugu soo dhaweeyo.
BOQORKA SUCUUDIGA Maraykanka QATAR TURKEY FM	2017-06-17
Previous: Taariikhda Burco iyo siyaasiyiinta ku suntan Khadka cagaan
Next: Bandhig-ciyaareedka BLACK STAR CIRCUS (SOMALILAND)